घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू फ्रेन्च फुटबल खेलाडीहरू बेंजामिन मिन्डी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबीले पूर्ण स्टोरीको फुटबल बुललाई सबभन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्दछ। "बेन"। हाम्रो बेंजामिन मिन्डी बचपन स्टोरी प्लस अनलल्ड जीवनी तथ्य तपाईले आफ्नो बचपनको समय सम्म उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता ल्याउनुहुन्छ। विश्लेषणमा उनीहरूको बारेमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र अफ-पिच तथ्यहरू भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले उनको बायाँ फिर्ता क्षमताहरू बारे जान्छ तर हाम्रो बिनजानाम मन्डी बायोलाई धेरै रोचक छ। अब थप adieu बिना, सुरु गरौं।
बेंजामिन मिन्डी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -बाल्यकाल
बेन्जामिन मिन्डी जन्म भएको जुलाई 17 को 1994th दिन, फ्रान्स लङ्गजुआउमा। उहाँ आफ्नो आमा, मोनिक माईटी र बुबा मिन्डी स्नरमा जन्मनुभएको थियो। बेंजामिन मिन्डीको परिवार कोट डी आइवर भन्दा जड छ।
बचपनबाट सही, मन्डी एक मजेदार मायालु चरित्र हो जसले आफैलाई नेताको रूपमा शैली दिन्छ। मन्डे बच्चाको रूपमा प्लेस्टेशन एड्स पनि थिए। बिन्यामीन मिन्डीको आमाको रूपमा, मोनिक मन्डीले यसो भन्छ, "मन्डेले मेरो जवानको रूपमा धेरै बचपनका प्रशंसकहरू थिए। यो थियो किनकी उनको प्लेस्टेशन उहाँ साँच्चै राम्रो हुनुहुन्छ। "
24 जुलाई 2011 मा, मन्डे ले आफ्नो पहिलो व्यावसायिक सम्झौता हस्ताक्षर गरे, लिग्यू2क्लब ले हवेरे संग तीन साल को अनुबंध। उनको छिटो शरीरले उनको विस्फोटकताले उनलाई क्लबको खेलाडीको स्थानमा छिटो उचाल्नको लागी बनाएको छ। यसले मार्सेलबाट कल लिन्छ।
मार्सिले मा, मिन्डी उनको प्रशिक्षक मार्सेलो बिसेला अका 'लो लोको' द्वारा उनको जीवन र उनको क्यारियर को गंभीरता संग लेने को लिए धक्का दिए। उनले वजन खोने, आफ्नो मीठो दाँत कट्टर गर्ने र आफ्नो शुरुवात गर्न चाँडो उठ्ने शासन शुरू गर्यो। मर्सिलेको सबैभन्दा राम्रो र सबै भन्दा प्रिय खेलाडी बन्ने लामो समयसम्म यो लागेन।
तथापि, 20 अप्रिल 2014 मा लील विरुद्ध शुरुमा उनको प्रदर्शन, पहिले मार्सिले द्वारा बायाँ एरिक आइको मकोले आलोचना गरेका थिए, जसले भने "एक चाउचाउ" यदि मिन्डीले फ्रान्सेली राष्ट्रिय टोली बनायो। सिजन पछि, मिन्डी 40 गोल्डन ब्वाइज अवार्डका लागि 2014-MAN छोटो सूचीमा समावेश गरिएको थियो। संसारमा सबैभन्दा बढ्दो बजार क्लब, मोनाकोले उनलाई सम्भावित स्थानान्तरणको लागि पनि सम्पर्क गरे।
मोनोकोमा, त्यसपछि उहाँ जोर्डिम भित्र जानुभयो, जसलाई उहाँले 'एल टैक्टिक' भनिन्छ, "एक जना खेलाडीले उहाँलाई एक खेलाडी र एक मानिसको रूपमा लाए"। The world got to know Benjamin Mendy more after his contribution to Monaco’s UEFA Champions League 6-6 aggregate victory over Man City. On 24 July 2017, it was announced that Manchester City had signed Mendy onafive-year contract, एक शुल्क को लागि £ 52m हुन को लागी उनको उसलाई दुनिया मा सबै भन्दा महंगे डिफेंडर बनाउन को लागी। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अब इतिहास हो।
बेंजामिन मिन्डी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -व्यक्तिगत जीवन
बिन्यामीन मिन्डीसँग उनको व्यक्तित्वको निम्न विशेषता छ।
मन्डेले आफूलाई ठूलो संगीत फ्यान हो र मोनाकोमा अर्ध-सरकारी ड्रेसिङ कोठा डीजे थियो।
बेंजामिन मिन्डीको शक्ति: उहाँ दृढ, अत्यधिक कल्पनाशील, वफादार, भावनात्मक, सहानुभूति र उत्साहित हुनुहुन्छ।
बेंजामिन मिन्डीको कमजोरीहरू: केही अवसरमा, उनी मूडी र असुरक्षित हुन्छन्। थप यति, उसले निराशावादी, शंकास्पद र हेरफेर हुन सक्छ।
बिन्यामीन मिन्डीलाई मनपर्छ: उनी कला / संगीत, घर आधारित शौकहरू, नजिकैको वा पानीमा आराम गर्दै, प्रियजनहरूलाई मदत गर्छन्, र साथीहरूसँग राम्रो खाने
बिन्यामीन मिन्डीले नमनपराउने: उहाँले अजनबीलाई, आफ्नो बुबा र आमाको कुनै आलोचना र व्यक्तिगत जीवनको खुलासा गर्नुहुन्न
सारांशमा, बिन्यामीन मिन्डी सहज र भावुक हो। उहाँ धेरै भावुक र संवेदनशील हुनुहुन्छ र तिनको परिवार र उनीहरूको घरको बारेमा गहिराइको हेरचाह राख्नुहुन्छ। उहाँ सहानुभूति हुनुहुन्छ र उहाँसँग नजिक रहनु भएको धेरै संलग्न हुनुहुन्छ। बिनजानाम मन्डी बेशक, धेरै वफादार र अन्य मानिसको पीडा र पीडा संग सहानुभूति गर्न सक्षम छन्।
बेंजामिन मिन्डी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
बेंजामिन मन्डेले आफ्ना साथीहरू र क्यारियरसँग प्रेममा धेरै धेरै छन् र उनीहरूलाई कम्तिमा एक पटक प्रेमिकाको आवश्यकता पर्दैन। तल एक चहचहाना सबूत छ।
बेंजामिन मिन्डी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -ड्रेसिङ कक्ष मास्टर
यसको अतिरिक्त, उनले बिन्यामीन मिन्डी ड्रेसिङ कोठा डीजे को भूमिका खेल्न मन पराउँछन्। सारांशमा, मन्डे ड्रेसिंग रूमको जीवन र आत्मा हो। उहाँ फिल्डमा मात्र स्पोरमेटिभ चरित्र होइन, त्यो परिवर्तनशील कोठामा समान रूपमा जीवंत हुन्छ। उनी उनको टोलीको लागि व्यावहारिक जोकरको रुपमा चिनिन्छन्। उहाँ प्रायः मस्तिष्कमा भेट्नुहुन्छ, जस्तै कि उहाँका टोली-साथीहरूको मोजामा बर्फ क्यूबहरू राख्नुहुन्छ।
उनीसँग सोशल मिडियामा पनि उहाँका सँगी पेशेवरहरू घुमाउने आदत छ। "एमबीपीपी जाने को इच्छुक थिएन र उनको टिम साथीहरु संग खिताब जीतने पछि मनाईन," एक पत्रकारले ट्वीट गरे। "र यो मजाक होइन।" मन्डेले मृतकलाई यस्तो जवाफ दिए: "उहाँ भोलि स्कूल हुनुहुन्छ।"
बेंजामिन मिन्डी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -प्रेरणाको स्रोत
अङ्ग्रेजी मार्सेलो फुटबलको इतिहासमा सबैभन्दा राम्रो बायाँ-ब्याक छ।
Mendy प्रतिभाशाली ब्राजील उनको प्रेरणा को लागी देख्छ। Mendy को लागी, मार्सेलको भन्दा राम्रो बायाँ ब्याक प्लेयर छैन। उनले मार्सेलोलाई कसैको रूपमा हेर्छन् जसले स्पष्ट रूपले आक्रमण र रक्षाको बीचमा सही सन्तुलनमा हिंडेको छ। यो एक संतुलन हो कि मन्डी स्वीकार्छ कि त्यो अझै पनि कमी छ।
उनको शब्दहरुमा ..."म उहाँको नियन्त्रण देख्छु, तिनको क्रसिंग र म उनको रक्षात्मक गुणहरू मनपर्छ। यो केहि चीज हो कि म मार्सेलो जस्तै मेरी आत्मा मा थोडा अधिक रक्षात्मक हो।
बेंजामिन मिन्डी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -यदि तपाईं तिनीहरूलाई हराउन सक्नुहुन्न भने, तिनीहरूलाई खरीद गर्नुहोस्
Raheem Sterling म्यान्डी को पछि म्याच को ओपनर को स्कोर को रूप मा इंग्लैंड ले 5-3 विजेताहरु लाई फरवरी मा 2017 चैंपियन्स लीग अंतिम-16 पहिलो पारी मा भागयो, तर बायाँ पछि मोनाको को खेल मा शीर्ष रेटेड रेट गरियो।
त्यसो भए उनीहरूले फेन्डिन्कोको लागि दोस्रो गोलको साथ सहयोग गर्दै र त्यसका लागि राम्रो प्रदर्शनमा फेलकोओसँग राम्रोसँग जोड दिएका थिए जसले गार्डियोोलाको बीजमा बोकेका थिए। मनोनयन पूर्ण-फ्याक्ट्रीमा साइन इन गर्नुहोस्।
बेंजामिन मिन्डी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -ओटो
V12 इञ्जिनको साथ फेरारी F2 F12X, 731 ह्याण्डसेभर जुन £ 250,000 को लागी जान्छ। मन्डेले एकपटक अवैध रूपमा आफ्नो पाउन्ड 250,000 सुपरकारा पार्किङ गरी ट्याक्सी रेटमा पार्क गरे र उनको समस्याको लागि पार्किङ टिकट दिए।
Mendy एकपटक रडिसन ब्लू एडवर्डिअन होटल को बाहिर अवैध रूप देखि आफ्नो फेरारी छोड दिए। उनी होटलमा गएर उनले मोनोकोबाट म्यान सिटीबाट आफ्नो स्विच पछ्याए। उनले आफ्नो आंशिक रूपले एक घण्टा भन्दा बढीको पदमा भाग लिइन् जुन यूके ट्राफिक वार्डनको ध्यान राख्यो जसले कारलाई £ £ 60 पार्किंग टिकट प्रदान गर्यो।
मन्डेले आफू फर्कंदा एक अप्रिय आश्चर्य थियो।
बेंजामिन मिन्डी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -आहार चिकित्सक
के तपाईलाई थाहा छ? ... एक चिकित्सकले मृत व्यक्तिलाई आजको व्यक्तिको रूपमा चिनेको छ।
पछि उहाँले मोनाकोमा सामेल हुनुभयो, मन्डेले तिनलाई आफ्नो खानाको साथ सहयोग पुर्याए। यो सानो प्रतिशत हो जुन उनको खेलको उच्च स्तरमा ठूलो फरक पार्ने छ। एक दैनिक चिकित्सक ल्याउन आफ्नो दैनिक खाना को भाप को प्रबंधन निश्चित रूप देखि Mendy को एक अद्वितीय गुणवत्ता को परिभाषित गर्दछ।
"उहाँसँग पूर्ण पूर्णताको सबै गुणस्तर छ र उहाँका शक्तिहरू उहाँको लापरवाह रवैया हो। तर यसले उनलाई रोक्न रोक्दैन। "
बेंजामिन मिन्डी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -बायाँ विंग कोड
उनको पेशी र क्लिनिकल टकलिंग छोडेर मन्डीको जगेडामा बायाँ फ्यांकले कुनै पनि केन्द्र-अगाडिको लागि अमीर फल असर गर्न सक्षम छ। Radamel Falcao यस तथ्यलाई समेट्न सक्छ। उनीहरूले मोनाकोमा खेल्दा ती जोडीले तुरुन्तै एक गहिराई बुझ्यो।
हरेक मौसमको शुरुआतमा, मन्डीले उनीहरूको टोलीमा स्ट्राइकरहरूसँग एकै कुराकानीमा एक व्यक्तिलाई मनपर्छ। लक्ष्य एक बायाँ विंग कोडमा सहमत हुन चाहन्छ जसले तिनीहरूलाई सर्वोत्तम प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। Mendy प्रमुख कारण हो किनकी 'एल Tigre', Falcao को रूप मा जानिन्छ, 30 खेलहरु देखि 43 पल्टहरु को स्कोर, 2013 मा Atletico मैड्रिड छोडने पछि उनको सबै भन्दा राम्रो हाल।
बेंजामिन मिन्डी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -सोशल मिडिया स्टार
मन्डेले ट्विटरमा 711,000 अनुयायीहरू र इन्टिग्राममा 463,000 भन्दा बढी चहचहानामा निम्न मापदण्ड छ जहाँ उनको क्रिप्ट ट्वीट्स किंवदंतीको सामान हो। तल एक चहचहाना सबूत छ।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो बिन्यामीन मिन्डि बचपन स्टोरी प्लस अनलोग जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाइँ केहि कुरा देख्नुहुन्छ जुन यस लेखमा सही देखिएन, कृपया तपाईंको टिप्पणी वा ठाँउ दिनुहोस् हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस!।